उत्तर कोरियाले बनायो खान मिल्ने कपडा ! - Nepal Insider
Home/समाचार/उत्तर कोरियाले बनायो खान मिल्ने कपडा !
संसारमा विचित्रका समाचार सार्वजनिक हुने गरेका छन् । हालै उत्तर कोरियाको एउटा समाचारले चर्चा पाएको छ ।आणविक परीक्षणको समाचारले चर्चा बटुल्ने उत्तर कोरियामा हालै शरीरमा लगाउनेसँगै भोक लाग्दा खान मिल्ने किसिमको कपडा निर्माण गरेको समाचारले चर्चा पाएको छ ।
जीप १ सय ५० मिटर तल खस्यो : एकजनाको मृत्यु २ जना घाइते !
चीन सरकारले गर्यो नेपाली सेनालाई यति ठुलो सहयोग , रसुवागढी नाका हुँदै भित्रिए ६३ ट्रक सामान !